Yintoni indawo yokuvula kwaye yenziwa njani? Ezezimali
Yintoni indawo yokuvula kwaye yenziwa njani?
IClaudi Casal | | iinkampani
Kuwo onke amangenelo obalo-mali akhoyo kwileja isihlalo sokuvula sesokuqala kwaye kubaluleke kakhulu. Ezi ziirekhodi eziqokelelwa ekuqaleni kokuzilolonga kwimeko yezoqoqosho nezemali yenkampani ngelo xesha lithile. Ngaphandle kovulo lokuvula ngekhe kubekhona ukuqala kwamaxesha kwi-accounting, kwileja ngokubanzi okanye nakweyiphi enye irekhodi yezoqoqosho kwinkampani.
Isihlalo sokuvula iqala umjikelo opheleleyo wenkampani ixesha lonyaka omnye. Ukusuka kuyo, yonke imisebenzi yezoqoqosho eyakuthi yenze ishishini ngeli xesha irekhodwa. Kwiinkampani ezininzi, zihlala zihambelana nonyaka wekhalenda, ukuqala nge-1 kaJanuwari kuye esiphelweni ngo-Disemba 31. Kuyo, umthwalo ngamnye okanye iiasethi ziya kuqokelelwa, oko kukuthi, ingeniso kunye nenkcitho. Ngenxa yale meko, ungeniso lokuvula alunakuba nazo iindleko okanye ingeniso. Ngandlela thile, ungeniso lokuvula lolo luqala ileja kuba xa ungeniso lwenziwe, iintshukumo kufuneka zigqithiselwe kwincwadi. Ukuqonda ukuba ungayimisa njani kwaye uyiqale, qhubeka ufunda eli nqaku silinikezele.
1 Umgaqo-siseko wesihlalo sokuqala sokuqala
2 Ukungena kokuvula kwenkampani esele imiselwe
3 Ukuvula umzekelo wesihlalo
Umgaqo-siseko wesihlalo sokuqala sokuqala
Ungeno lokuqala luya kuba lolokuqala lokuvula ukuba kwenziwa xa uqala ishishiniOko kukuthi, xa kusenziwa / kuzalwa ishishini elitsha. Zimbini iimeko apho kufuneka kuvulwe khona ukungena, kwaye le iya kuba yimeko yokuqala.
Koku kungena okokuqala, yonke imirhumo eyenziwe ngamaqabane ayenzileyo iya kubonakala. Banazo zonke iiasethi kwaye banokuba zombini ezoqoqosho kunye nokuthengisa izindlu nomhlaba, umhlaba, ifanitshala. Yonke le nxalenye Kuyaphawulwa kwicandelo "kufuneka" emva koko kwi "have" capital share, njengoko amanqaku okufakwa kwinkampani enziwe.
Zonke iindleko ezithatyathwe ekubandakanyeni inkampani, ezinje ngerhafu, zirekhodwa njenge-equity emva kokungeniswa kokuqala kokuvula. Emva kolu ngeniso, zonke iindleko ezizezakho ezivela kwimisebenzi, ezinje ngee-invoyisi, imivuzo, iirhafu, kunye nengeniso evela kwintengiso okanye iinkonzo ezinikezelwayo, zinokuqhubeka.
Emva konyaka wekhalenda kwaye ufikelele esiphelweni somjikelo wobalo-mali, kufuneka kwenziwe ukungena kokuvala. Iiakhawunti kufuneka zingeniswe kuyo ukuze uzishiye zingalinganiyo. Ngale ndlela, ungeniso olutsha lokuvula lonyaka-mali olandelayo lungaqaliswa, kugqithiselwe amaxabiso amadala kulowo mtsha. Ukulandela imeko efanayo, uqaphele iiasethi kwiiakhawunti ze "debit" kunye namatyala kwiiakhawunti "zekhredithi".
Ukungena kokuvula kwenkampani esele imiselwe
Ungeniso lobalo-mali lokuqala olwenziwe kunyaka-mali ngamnye sisihlalo sokuvula. Kuza emva kokungena kokuvala, okukungeniswa kokugqibela kokubalwa kwemali okwenziwe ekupheleni konyaka.
Ungeniso lokuvula lwenziwa ngokulandela indlela efanayo neyangaphambili, kodwa ukuqala kwinkampani esele yenziwe. Idatha enokubakho inokwahluka ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, kodwa ihlala inamatyala amathathu. Eyokuqala kukudlulisa amaxabiso ukusuka ekungeneni kokuvala kungena kuvulo lokungena. Kwimeko yesibini ngebhalansi yonyaka ophelileyo okanye kwimeko yesithathu naxa kungekho datha.
Ukuvula umzekelo wesihlalo
Siza kwenza umzekelo wentelekelelo yokungena kokuvula kwenkampani esiya kuyibiza «ezemali 521 SL». Emva kokugqiba ungeniso lokuvala kunyaka-mali ophelileyo, siyaqhubeka nokuqala ukungena komjikelo omtsha wobalo. Kwibhalansi ebesinayo ekupheleni konyaka esinokuba nayo, umzekelo, ezi zinto zilandelayo:
Esebenzayo: Oomatshini abangama-3.000 euros. Imali engama-500 euros. Abathengi i-euro ezingama-600. I-800 zama-euro.
Umsi: Imali eyinkulungwane ye-euro. Ukubhuka kwe-euro ezingama-1.000. Amatyala e-euro ezingama-400.
Onke amacandelo ee-asethi aya kuqatshelwa kuqala kwicandelo "kufuneka", emva koko phantsi kwe "asethi" amatyala achazwe apha ngasentla aya kuhlala eqatshelwa ngokuhla (njengoko kuya kuba kukuqhubeka).
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ungeniso lokuvula lunokuqalwa okokuqala ukuba inkampani ibandakanyiwe. Kule meko, zihlala zilula kakhulu kuba akukho mali ibhalansi kwaye zihlala ziyimali okanye iibhanki (ngenxa yegalelo elenziwe ngamaqabane awohlukeneyo). Sinokuzifumana nakwimeko yenkampani esele inenkqubo yobalo. Kule meko, inkqubo ngokwayo iya kuzenzekelayo kwaye xa kuvalwa umjikelo wangaphambili ukungena kokuvula kuya kuqala. Kwimeko apho omnye umntu egcina le ngxelo, kukho umsebenzi omncinanana kwaye kubalulekile ukuba zonke iiakhawunti zivaliwe kwaye emva koko uqale ungeniso lokuvula.
Ukuziqhelanisa, akuyi kubakho ulwaphulo ngokubanzi "njengoomatshini" okanye "abathengi", njengoko ibiyimbono yokwenza lula. Ngokwesiqhelo kuya kubakho ifayile yomthengi ngamnye, kunye nokwahlulwa kweeasethi ezahlukeneyo ezinayo inkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Yintoni indawo yokuvula kwaye yenziwa njani?
Ukusebenza ubomi kwimizuzu emi-5
Konke malunga nentswela-ngqesho